Fandatsahana ny tohin'ny pejy fandoko | Fisorohana
Aza mamela na inona na inona amin'ny tohatra?
Pejy fandokoana Aza avela na inona na inona amin'ny tohatra
Hitanao ve izay mitranga eo amin'ny sary? Rehefa avy nilalao dia nisy zavatra tsy natsipy ary navela teo amin'ny tohatra fotsiny. Tena mampidi-doza izany satria ianao, ny ray aman-dreninao na ny namanao dia mety hianjera mora foana amin'ireny zavatra ireny ary handratra tena mafy.
Satria tsy tianao izany dia mba apetraho foana ny entanao ary aza avela hisy zavatra eny ambonin'ny tohatra.